I-Ecamm Live: Kufanele Ube Nesoftware Yakho Konke Ukusakaza Okubukhoma | Martech Zone
I’ve shared how I had assembled my ihhovisi lasekhaya yokusakaza bukhoma ne-podcasting. Okuthunyelwe kunemininingwane eningiliziwe ngezingxenyekazi zekhompyutha engizihlanganisile… kusuka edeskini elimile, imakrofoni, ingalo yemakrofoni, imishini yomsindo, njll.
Ngokushesha ngemuva kwalokho, ngangikhuluma nomngani wami omuhle uJack Klemeyer, a uqinisekisile uJohn Maxwell Coach futhi uJack wangitshela ukuthi ngidinga ukungeza I-Ecamm Bukhoma kuthuluzi lami lamathuluzi lesoftware ukuthatha ukusakaza kwami ​​bukhoma kube notch. Isoftware iyakhazimula impela, ikwenza ukwazi ukudala ikhamera ebonakalayo kusistimu yakho lapho ungathola khona noma iziphi izithuthukisi zokusakazwa bukhoma.
Isimo Esibukhoma se-Ecamm
Here’s a great overview video from the I-Ecamm Bukhoma abantu uqobo lwabo…
Izici ezibukhoma ze-Ecamm zifaka
Okokufaka Ikhamera - Sakaza futhi ushintshe ukubuka ngekhwalithi ye-HD usebenzisa noma iyiphi ikhamera exhunyiwe ye-USB, ikhamera ye-laptop, i-DSLR, noma ikhamera engenazibuko.
Ukufakwa kwevidiyo - Sakaza amadivayisi wokuthwebula we-Blackmagic HDMI, i-iPhone, ne-Mac screen.
Okokufaka komsindo - Sebenzisa noma iyiphi imakrofoni exhumekile ukunikeza umsindo.
Ukusekelwa kwe-4K - Qopha futhi usakaze nge-crystal clear 1440p ne-4K.
Isikrini Esihlaza - Shintsha isizinda sakho ngesici sabo sesikrini esiluhlaza.
ukunqwabelanisa - engeza umbhalo, ukubala phansi, ukuphawula kwesibukeli, izingxenye ezintathu kweziphansi, nemidwebo efana nelogo yenkampani ekusakazeni kwakho bukhoma
Ukuqapha Kwangempela - Bheka ukusakazwa kwakho kusibonisi esixhunyiwe.
Izigcawu ezilondoloziwe - ungabhala izigcawu kusengaphambili, ugcwalise ngezihloko ezikusikrini nezikrini zokuhlukanisa. Lokhu kungisizile, lapho ngingaba khona nezigcawu zebhizinisi lami ngalinye.
Ukwabelana Ngesikrini - Sakaza izethulo zakho, okokufundisa, namademo ngokuchofoza okukodwa. Khetha ukwabelana ngesikrini sakho sonke, noma uhlelo lokusebenza oluthile noma iwindi. Faka okubukhoma isithombe-in-isithombe ekusakazweni ukuze uthinte umuntu siqu.
Ukuhlanganiswa kwe-Skype - yenza izingxoxo ezilula zokuhlukanisa isikrini usebenzisa ikholi yevidiyo ye-Skype, futhi uzobona izivakashi zakho zivela njengemithombo yekhamera ku-Ecamm Live.
Phinda uqambe - ukuhlanganiswa ne-Restream.io ne- switchchboard Live kusho ukusakazwa bukhoma kuzingxenyekazi eziningi ngasikhathi sinye kulula njengokuchofoza okukodwa. Futhi ngokusekelwa okwakhelwe ngaphakathi kokuhlanganiswa kwengxoxo kaRestream, i-Ecamm Live ingabonisa ngisho namazwana wengxoxo avela kuzingxenyekazi ezingaphezu kwezingu-20.
Dlala ividiyo - Sakaza ifayela levidiyo lezingeniso nezingxenye ezirekhodwe ngaphambilini.
Esinye sezici ezibaluleke kakhulu kimi ukuthi i-Ecamm Live inezilawuli ezingakholeki ukuze ngikwazi ukulungisa okwami I-Logitech BRIO ukusondeza kwekhamera yewebhu ne-pan, ukukhanya, izinga lokushisa, ukubala, ukusuthisa nokuhlunga i-gamma.
Qalisa MAHHALA nge-Ecamm Live
Ukudalulwa: Ngingumxhumanisi we- I-Ecamm Bukhoma ne-Amazon futhi ngifaka lezo zixhumanisi kulokhu okuthunyelwe!
Tags: ukhiye wokusakaza ngokwezifisofacebook bukhomaUkusakazwa bukhoma kwe-FacebookUkusakaza kwe-Facebookukusakaza bukhoma kwe-linkedinukusakazwa kwe-linkedinbukhoma ukusakazai-logitech briookuphansi kokuthathukhala kabushaphinda.ioUkusakazaisofthiwe yokusakazaswitchboard bukhomaTwitchukudikiza ukusakaza bukhomaukuswitch ukusakazaUkusakaza kwevidiyoisoftware yokusakaza ividiyoUkusakazwa bukhoma kwe-YouTubeUkusakaza kwe-YouTube
I-Optimizely Intelligence Cloud: Ungayisebenzisa Kanjani Injini Yezibalo Ku-A / B Test Smarter, Futhi Ngokushesha